OTU ESI EHICHAPU IBE NA EKWENTI NA EKWENTỊ RUE MGBE EBIGHI EBI - EKWENTỊ - 2019
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ozi ọma na mgbasa ozi maka otu mpaghara ma ọ bụ na-akpaghị aka ịchọpụta nhazi na saịtị Yandex anaghị arụ ọrụ nke ọma, ị nwere ike idozi ọnọdụ ahụ n'onwe gị.
Ịwụnye ọnọdụ na Yandex
Iji gbanwee ọnọdụ gị, na-agbaso usoro ole na ole dị mfe.
Iji malite, mepee ibe Yandex. N'ihe dị n'akụkụ ngalaba na ịnweta akaụntụ gị, pịa na akara "Ntọala" wee gaa na menu egosiri, pịa na eserese "Gbanwee Obodo".
Ọzọ, ị ga-ahụ ntọala Yandex-portal na oghe mepee. "Ebe". Tinye n'ime akara "Obodo" ọnọdụ a chọrọ ma pịa "Chekwa".
Ọ bụrụ na ị na-ele igbe ahụ "Chọta obodo na-akpaghị aka", Yandex ga - egosipụta ozi gbasara ọnọdụ gị kpọmkwem.
Mgbe ị gbanwee ọnọdụ gị, wijetị na Yandex mbụ search page ga-egosipụta data data maka obodo ahọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nọ na Ukraine, ị ga-etinye obodo ọ bụla na Russia, mgbe e mesịrị akụkọ, ihu igwe na ozi ndị ọzọ ga-elekwasị anya na ozi Russia site na Ukraine.
Ugbu a ị maara otú ị ga-esi gbanwee mpaghara na Yandex ma na-enweghị omume ndị na-enweghị isi ị nwere ike ịlele ndepụta ozi nke mpaghara a họọrọ na saịtị mmalite nke saịtị ahụ.